चेल्सीले मेसीलाई किन रुवाएका थिए ? – Makalukhabar.com
चेल्सीले मेसीलाई किन रुवाएका थिए ?
काठमाडौं, फागुन २९ । कुरा २०१२ को च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको हो । बार्सिलोनाका खेलाडी र क्लबले त्यो रात शायद भुल्न चाहन्छन् । पेप गार्डीओलाको अन्डरमा रेकर्डमाथि रेकर्ड बनाईरहेको बार्सिलोनाले चेल्सीसँग पहिलो लिगमा १-० को हारपछि सेमिफाइनलको दोस्रो लिग खेल्दै थियो । घरेलु मैदानमा हुने दोस्रो लिगमा कमब्याक गर्नेमा बार्सिलोना र म्यानेजर पेप ढुक्क थिए ।